Iziqhamo nemifuno Ukuhlamba Processing Machine Line - China Qingdao Machinery uqinise
Iziqhamo nemifuno Ukuhlamba Ukwenziwa Machine Line yi ukufunxa ekusetyenzweni yemifuno ehlabathini ingqiqo phambili jikelele, kudityaniswe ezininzi China izixeko zasekhaya zemifuno kunye / okanye imveliso processing iziqhamo. Sisungule wonke umnombo kwezixhobo iziqhamo nemifuno processing. Ithekhnoloji Izixhobo abadala. Imifuno zicocwa, wathatha, wonqanyulwa, imifuno, iintsholongwane, amanzi, yaye emva ukuhlolisisa, bangena kwimarike umhlali iiphakheji ezincinane, yaye uye kwimarike sidliwe in big p ...
Iziqhamo nemifuno Ukuhlamba Ukwenziwa Machine Line yi ukufunxa ekusetyenzweni yemifuno ehlabathini ingqiqo phambili jikelele, kudityaniswe ezininzi China izixeko zasekhaya zemifuno kunye / okanye imveliso processing iziqhamo. Sisungule wonke umnombo kwezixhobo iziqhamo nemifuno processing.
Ithekhnoloji Izixhobo abadala.
Imifuno zicocwa, wathatha, wonqanyulwa, imifuno, iintsholongwane, amanzi, yaye emva ukuhlolisisa, bangena kwimarike umhlali iiphakheji ezincinane, yaye uye kwimarike sidliwe kwi phakheji ezinkulu.
Emva zolimo, imifuno kunye neziqhamo aba kunye inkalo ezihlambulukileyo, ucoceko, lula nekhuselekileyo njl
Umgca kwimveliso ingasetyenziswa ukuqhuba: ikhaphetshu, imifuno, cauliflower, lettuce, iminqathe, mushroom, iipepile oluhlaza, iitapile, seqanda, iimbotyi eziluhlaza, ertyisi kunye neminye imifuno.
Lo matshini yenziwa ekumgangatho ophezulu SUS304 steel stainless, ngokuhambelana nemigangatho yokudla yesizwe, umgca yemveliso lamkele kwiqamza kuluhlu / tshitshilili / ubuchwepheshe amanzi cleam imifuno kunye neziqhamo kangangoko inkulu.
Oomatshini kumgca, ukuphakama yi adjustable ngokulungisa ivili casters / emgangathweni, igesi pump ioksijini, ukuze amanzi ngokupheleleyo amaqamza ezikhangeleka eluhlaza. Le webhokisi ye amadlu bavelisa
ultrasound, ngoko imifuno kunye neziqhamo ungafumana i ngokusebenzisa acocekileyo kunye limele.
line magciwane: ixesha kweentsholongwane singayilwa kwaye ibekwe ngokweemfuno iinkcukacha abaxumi '. Ngenxa spray nakwibhafu amanzi, yenza imifuno kunye neziqhamo kumkhawulela standard kumazwe angaphandle.
Zokuchela line / zokutshiza: yesibini acocekileyo emva kokubulawa kwamagciwane, wonge amanzi isitshizi amanzi.
line yokomisa; Iimveliso ukufumana wokwaphusa ngokukhawuleza, ukuze kuthintelwe ungcoliseko yesibini emva kweentsholongwane.
Ngokutsho iimfuno zabasebenzisi ukongeza ozone nzala, zokutshiza nehigh kunye ibrashi ukususa ukungcola / ngezinto.
Xa ukusetyenziswa wokucoca ityuwa, ungasebenzisa oomatshini iseti ezininzi ngayo iintlobo ezahlukeneyo nemifuno kunye neziqhamo.
Previous: Hot Water Iodine Tank Machine
Okulandelayo: Three Pot Parallel Udidi Ukutya Processing babethi Machine
yorhwebo yemifuno umatshini wokuhlamba
izixhobo umbona processing
umatshini umbona processing
umhla line processing
umhla izityalo processing
fresh ingcambu yegqabi iqhoshana yemifuno umgca umatshini processing
iziqhamo yemifuno fresh imihla wokuhlamba umatshini wokucoca yokomisa
iziqhamo kunye umgca yokomisa zokucoca yemifuno
iziqhamo oomatshini processing yemifuno wokuhlamba yokomisa umatshini nomgangatho
kumatshini wokuhlamba yemifuno ekhaya
igqabi yemifuno umatshini wokuhlamba
yokutyela yemifuno umatshini wokuhlamba
ingcambu yemifuno umatshini wokuhlamba
imifuno kumatshini wokuhlamba
umatshini umbona processing elithozamisayo
imifuno kunye kumatshini wokuhlamba iziqhamo
imifuno umatshini wokuhlamba iziqhamo
ixabiso kumatshini wokuhlamba yemifuno
imifuno wokuhlamba umatshini ne-ozone